प्रचण्डको उक्साहटमा साथीहरु पार्टी भित्र अन्तरबिरोध पैदा गर्दै हुनुहुन्छ : महासचिव पोखरेल | News Polar
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले पार्टी भित्र विभिन्न कारणले श्रृजना भएका अन्तरविरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले “सेकतापका” गरेका कारण वर्तमान स्थिति उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं महासचिवले भेला नगर्न दिएको निर्देशन विपरित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता आयोजना गरेको सन्र्दभमा उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । अन्तरविरोधहरुमा खेलेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न अभ्यस्त दाहालले एमालेभित्रका अन्तरविरोधलाई प्रयोग गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
- नेकपा एमालेभित्र भएका कुरा सार्वजनिक नै भईरहेको छ । तर यसको कारण बुझ्न खोज्नुभयो भने त्यसका दुईवटा पाटा छन् । पहिलो पाटो भनेको हिजो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा जुन किसिमले पार्टी एकिकरण भएको थियो, स्वरुपमा हेर्दा त्यो अत्यन्तै राम्रो थियो किनभने जनता र कार्यकर्ताले चाहेको, राष्ट्रिय आवश्यकता पनि पुरा हुने । राजनीनिक स्थायीत्वका लागि त्यसले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । तर सारमा के भयो भन्दा विचारलाई व्यवस्थित गर्ने काम अलिकति भएको थिएन । संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको थिएन र नेतृत्वको मामिलामा व्यवस्थित गर्ने काम भएको थिएन ।
- किन त्यस्तो भयो त भन्दा पार्टी एकिकरण गर्ने सन्र्दभमा जुन नेतृत्व केन्द्रहरु थिए, ती केन्द्रहरुमा रहेका आग्रहहरु हावी भए, त्यो आग्रहहरु हावी भएका कारणले त्यो महान र पवित्र एकता परिपक्को हुन नपाईकनै सम्पन्न भएको थियो । त्यसकारणले के भन्न सकिन्छ भने यो एकताको बेलामा जुन भ्रुणहरुमा समस्या थिए । त्यही समस्या प्रकट भयो अहिले । त्यसको उत्कर्षमा पुगेको हो अहिले ।
- समाधान के हो भने अहिले जुन उचाईमा हामी पुगेका छौ । यही उचाईमा चुनौतिहरु पनि आए । जुन उचाईमा चुनौतिहरु आएका छन् । यही उचाईमा चुनौतिको सामना गर्ने सामथ्र्य पनि हामीले आर्जन गर्नुपर्छ । त्यो सामथ्र्यको लागि एउटा भावनात्मक आधार भनेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्छ यो राष्टको आवश्यकता हो । जनताको आवश्यकता हो । विगतमा हामी जो जसले कमी कमजोरी गरेको भएतापनि त्यसलाई एउटा बस्तुनिष्ट भएर त्यसको आत्म समिक्षा पनि हुनुपर्छ । आत्मसमिक्षा गर्दा आफ्ना कमि कमजोरीहरुलाई रियलाईज गर्दा सानो भईदैन । कमजोर भईदैन । झन त्यसले शक्ति प्राप्त हुन्छ ।
- यो गल्ती कमजोरीको कुरा मात्रै होइन । पार्टीलाई वा नेतालाई , निर्णयलाई, नीतिलाई ,जुनसुकै कुरालाई पनि सतप्रतिशतमा बुझ्नु हुदैन । सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ । प्रतिशतमा बुझ्नुपर्छ । कमिकमजोरीहरु भएका हुनसक्छन् । कहीँ धेरै मात्रामा कमजोरी भएका हुनसक्छन् । कहीँ कमि होलान् तर गम्भीर कमजोरी के हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । गम्भीर कमजोरी भएपनि त्यो नेकपा एमालेभित्र कै साथीहरुबाट भएका हुन् । त्यसलाई सच्याउने आँट गर्नुपर्छ । त्यो साहस गर्नुपर्छ । मैले अघिनै भनेँ, कमजोरी सच्याएर मान्छे सानो भईदैन । यसले आन्दोलनलाई नै बल पुग्छ र व्यक्तिलाई पनि उसको मोरल हाई पनि हुन्छ । त्यो गर्नु जरुरी छ । के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने कुरा त केही आधारभूत सिमा रेखाहरु त हुन्छन् नि । जस्तो पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएर केपी ओली आउनुभयो । पुर्व पार्टीको महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको अध्यक्षको नाताले एकिकृत पार्टीको अध्यक्षको रुपमा उहाँ आउनुभयो । अब अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भएको नाताले प्रचण्ड आउनुभएको थियो । यो दुईवटा अध्यक्षको विशेष व्यवस्था हामीले गर्यौ ।
- देशभरीका पार्टी कार्यकर्ताले यी विगतमा भएका कुराहरुलाई कसरी मुल्यांकन गर्ने ? यो आज वस्तुनिष्ट समिक्षा गर्नुपर्छ । आत्मालोचना गरिरहनुपर्छ भनिरहँदा यी विगतका कुरा हेर्न जरुरी छ ।
- कात्तिक २८ गते एउटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट अर्को अध्यक्ष केपी ओलीलाई अभियोग लगाईयो ।त्यो अभियोग अत्यन्तै संघीन छ । त्यो अभियोगले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्रै नालायक होइन केपी ओली ,पार्टी सदस्य पनि रहन नसक्ने । त्यत्तिमात्रै होइन फोजदारी अभियोग लगाएर दण्डित गर्नुपर्ने खालका अभियोग , एउटा संघीन अभियोग लगाईसकेपछि एकताको जग कसरी कायम रहन सक्थ्यो ? त्यो जग कसरी टिक्न सक्थ्यो ? त्यस्तोबेलामा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफै खुमलटारमा गएर पुष्पकमल दाहालाई भन्नुभयो तपाईले जुनखालको अभियोग लगाउनुभएको छ यो अभियोगलाई म अस्वीकार गर्छु तपाईले फिर्ता लिनुहोस् । पार्टीका आन्तरिक समस्याका बारेमा छलफल गरौ । यदि गर्नुहुन्न भने आधा सताब्दीको मेरो राजनीतिक जीवन माथि धावा बोलेपछि मैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ । जनता न्यायाधीश हुन् । न्यायदिने जनतासंग मैले जानुपर्छ भनेर उहाँले बताउनुभयो । तर त्यसलाई गम्भीरताका साथमा लिईएन ।
- हिजो नेकपा भएको कालमा जे सुकै भएको होस् । अब त २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा हामी आईपुग्यौ । अर्थात् माओवादी केन्द्र आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ने भयो र नेकपा एमाले आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्ने भयो । त्यो पुर्व अवस्थामा आईसकेपछि अब नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्नका लागि कसरी जाने भन्ने हिसाबले सोच्नु जरुरी छ ।
- तनाबका साथ छलफल गर्नुपर्ने विषय नै हो जस्तो लाग्दैन मलाई । सामान्य निजी पारिवारिक विषयमा पनि आजकल श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्ध राम्रो भएन भने सल्लाह गरेरै अब तिम्रो हाम्रो यो जोडी नचल्ने भो अब हामी अलग अलग रहौ भनेर भन्छन् रे । त्यो अभ्यास पनि प्रारम्भ भएको छ । राजनीतिमा त के भो र ? राजनीति यही समाजमा गर्ने हो । हाम्रा योग्यता र अयोग्यता यही समाजका मानिसहरुले जज गर्ने हुन् । त्यसकारणले यदि सम्बन्ध कायम नरहन सक्दा त सल्लाहाले नै गर्दा भईहाल्छ केही पनि फरक परेन ।
- नेकपा एमालेको नवौ महाधिवेशले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी ओली । निर्वाचित गरेको महासचिव म । हाम्रो विधानले अध्यक्ष र महासचिवले कार्यकारी हैसियतले भूमिका खेल्छन् । अध्यक्ष र महासचिवको तर्फबाट नै बैठक बोलाईएको हो । संसदीय दलको बैठक दलको नेताको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जीले बोलाउनुभएको हो । त्यो बैठकमा आउनु सबैको कर्तव्य हो । बैठकमा हामीले बोलाएका छौ उहाँहरु आउनुहुन्छ । त्यस विषयमा पनि आवश्यकता अनुसार छलफल हुन्छ ।
- यो हाम्रो पार्टीको जीवन कस्तो छ भने । हामीले अनेक उतारचढाव झेलेका छौ । उतारचढाव भोगेका छौ । हामीसंग एकता, फुट अनि जुटका पनि अनुभव छन् । एकता गर्दाको अनुभव पनि छ । एकता टुटेर दुख पाएको अनुभव पनि छ हामीसंग । अनि ती अनुभव प्राप्त गरेका नेता साथीहरु पनि हुनुहुन्छ हामीसंग । हाम्रो पार्टीले अनेकखालका उतारचढावहरु झेल्दै आएको छ । हामीले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा धैर्यता राख्नुपर्छ । संयमता राख्नुपर्छ । एकले अर्कालाई आरोप लगाउने जस्तो मात्रै कुरा गर्नुहुदैन । हामीले यतिबेला पार्टी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने विषयमा नयाँ ढंगले छलफल गर्नुपर्ने जरुरत छ । आज नेकपा एमालेको जीवनमा देखा परेको यो कुराले हामीलाई यो पार्टीको नेतृत्वमा अगाडि बढेको आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने , यसमा आधारित भएर पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने ? हाम्रो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र पार्टी निर्माणको दिशा के हो ? त्यसमा केन्द्रीत भएर बहस छलफल केन्द्रीत गर्ने । हामीले कुनैपनि किसिमको अधिनायकवाद मञ्जुर गर्दैनौ भन्दछौ । हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्तमा कतिपय चाही अधिनायकवादको गन्ध आउने केही कुरा छन् भने त्यो अभ्यासलाई पनि पुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरत छ । पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको कुन किसिमले हो ? हाम्रो जस्तो देशको विशिष्ठ अवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउने भन्नाले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु जरुरी छ । र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा हामीले विगतमा जे जे कुरा गरेका छौ त्यसलाई पनि रिभिज गर्नुपर्ने जरुरत छ ।
- देशभरीका कार्यकर्ता र नेकपा एमालेलाई माया गर्ने सबै साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु यतिबेला उत्तेजना र आवेशबाट होइन ,संयमता धैर्यताका साथमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ । र विगतका अनुभवहरुलाई पनि सम्झना गर्नुपर्छ । पार्टी एकता सबैभन्दा ठूलो चीज हो । एकतामा आँच नपुगोस् भन्नका लागि हामी सबैले संयमता धैर्यताका साथ अगाडि बढेर, अब नयाँ ढंगले पार्टी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो चुनौतिलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । सबै साथीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, चुनौतिका गर्भभित्र अवसरहरु नि लुकेका हुन्छन् । त्यो अवसरलाई चिर्नुपर्छ । त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र ०५, २०७७, १३:१६:०३